Indonesian ọchịchị amụ Bitcoin si uru dị ka onye na ego
The Indonesian ọchịchị na-enyocha ihe Bitcoin iji dị ka onye na ego ngwá, na Trade Ministry nke Futures Exchange nlekọta Board (Bappebti) kwuru.
"Iji Bitcoin dị ka a ịkwụ ụgwọ na-aju, ma otú banyere eji ya dị ka onye na ego ngwá? Na-a kwere ma ọ bụ na?"Bappebti isi Bachrul Chairi kwuru na Tuesday na Jakarta, dị ka a kọrọ site kompas.com.
Indonesian Iwu No. 7/2011 na ego na-ekwu na Rupiah bụ naanị ukara azụmahịa na ịkwụ ụgwọ na mba.
Bachrul kwuru Bappebti na-amụ ekwe omume ojiji nke Bitcoin dị ka onye na ego ngwá. "Site na-amụ, anyị chọrọ ịhụ ma ọ bụrụ na Bitcoin nwere ike a na-emeso dị ka a digital akpan owo,"Ka o kwuru.
Market-elekọta na mmepe Bureau isi Dharmayugo Hermansyah na Bappebti kwuru nzukọ hụrụ oké nwere na Bitcoin ngwaahịa trading.
iche iche, Finance Minister Sri Mulyani Indrawati kwuru na ọ dịghị iwu na mba machibidoro ụmụ amaala ya si etinye na cryptocurrency. "Ọ bụ na ndị mmadụ na-eji Bitcoin dị ka onye na ego ngwá,"Ọ mesiri.
First Bitcoin ibu ndibiat transports wheat si Russia na Turkey
Cryptocurrencies na-eme mebie nri nnweta trading.
The mbụ ibu ndibiat biri na Bitcoin na e gburu ikpeazụ nke ọnwa na a arịa ebu wheat site n'elu shipper Russia na Turkey, dị ka Prime Mbupu Foundation, na ịmalite n'azụ azụmahịa.
The consignment bụ akụkụ nke pilot ule nke Prime Mbupu Foundation nke blockchain ugwo usoro maka nnukwu onu ahia, kwuru Chief Executive Officer Ivan Vikulov.
The Ledger dabeere digital technology ga-eme ozugbo nhazi nke ịkwụ ụgwọ na akakabarede n'ime na nke cryptocurrencies, dị ka ụlọ ọrụ, a ediomi n'etiti Gibraltar dabeere Quorum Capital Ltd. na ụgbọ mmiri ore Interchart LLC. The otu na-eme atụmatụ na-ike ya nke digital ego.
CEO nke Russia kasị ukwuu akụ: Cryptocurrencies ekwesịghị iwu
Akpa Russian onye oru banki Herman Gref, isi nke Sberbank, ka nyeghachiri ọnọdụ ya na-emegide a ban nke cryptocurrencies.
Russian ọchịchị na ego isi kwesịrị ịnabata ihe cryptocurrencies na blockchain technology, Russian ozi gị n'ụlọnga TASS ruturu Sberbank CEO Herman Gref dị ka na-ekwu. The onye oru banki wee a nzọụkwụ ọzọ, emesi ya ike na cryptocurrencies bụ ma na-ghọtara na ihe ọ bụla ụkpụrụ a ga-tụrụ na-ewere, bụghị reactionary.
Gref kwuru “ọ [crypotocurrencies] -ekwesịghị iwu, dị ka ọ bụ oké ọhụrụ technology na mmepe, nke na ọ dịghị onye bụ ma na-aghọta.”
Ke ufọt ufọt 2016, gburugburu Russian ego ozi nke (okpu) anwa ịme a bitcoin ban iwu na-criminalized Bitcoin adopters, Gref n'ihu ọha kwuru ejide a obere ego nke bitcoin na-emegide iwu. Oge ahụ, Russia si ego ozi chọrọ a ikpe ịga mkpọrọ ruo 7 afọ maka bitcoin adopters.
Brisbane Airport ịnabata Bitcoin
Brisbane Airport ka ewere onwe ya dị ka ụwa mbụ digital ego friendly ọdụ.
The Aussie ọdụ ka partnered na a ọnụ ọgụgụ nke Jeriko na TravelbyBit. Njem ga-adịghị anya-enwe ike iji TravelbyBit si cryptocurrency ugwo usoro, nke na-agụnye Bitcoin na ndị ọzọ na digital ego, na iri nri na ịzụ ahịa na ọtụtụ dị iche iche na-echekwa gafee ma ọnụ.
The ediomi emesi Brisbane Airport Nzube na-akwado obodo oru, melite njem ahụmahụ, na ọ bụrụ onye ndú na ọdụ digital ọhụrụ ohere.
Site ọdụ iga okomoko hotel ulo, na nri na ntụrụndụ venues na Brisbane si obi ike Valley, Brisbane e rebranded site obodo dị ka 'kaadị Valley' na ihe karịrị 20 ahịa na ebe now na-ewere digital ego ịkwụ ụgwọ.
Caleb Yeoh, CEO nke TravelbyBit, kwuru na "Mgbe ọ bụla ị na-eme njem esenidụt ị ga-emeso na otutu ego na gị mgbe ihe mgbanwe udu mmiri na-anakwa ị. Ebe a na TravelbyBit anyị na-akwado Bitcoin njem ije. Digital ego maka uwa dum njem. Ọ bụ ihe dị mfe, mma ma e nweghị ụlọ akụ ụgwọ,"Mr Yeoh kwuru.
Stock trading ngwa Robinhood ẹkedori Bitcoin & Ethereum trading
Ahịa na California, Massachusetts, Missouri, Montana na New Hampshire ga-enwe ike ahia bitcoin na ethereum site ngwa malite na February, Robinhood mara ọkwa Thursday. Ma ugbu a, niile ahịa pụrụ ugbu a soro ahịa na-enweta alerts maka 16 cryptocurrencies na ngwa.
Robinhood ulo oru banyere afọ isii gara aga ka a ụzọ maka ndị ahịa, ukwuu n'ime tọrọ investors, ahia ebuka site na ha smartphones maka free. Robinhood nwekwara a adịchaghị ugwo ọrụ, na na December ulo oru nhọrọ trading. The ụlọ ọrụ ugbu a nwere ihe karịrị 3 nde ọrụ, na 78 percent ịdaba na-akpọ Narị Afọ Iri afọ udi nke 18 ka 35 afọ.
N'ihi cryptocurrency trading, Robinhood ga-enwe ego minimums ma ọ bụ maximums, na ọ dịghị ndọrọ ego ókè. The mmalite-elu ga jide ọtụtụ ndị digital ego offline na ihe a na-akpọ oyi nchekwa. The omume egbochi hackers si na-ezu ohi ego.
Bittrex ga-ekwe ka i ...
The entrepreneur were ...
Previous Post:Ịkwụ Ụgwọ ọrụ straipu jụ Bitcoin
Next Post:Onye bu ihe agha agha e mere na Canadian kaadị Exchange